I-nudism e-Asia namabhishi ayo, ifuna inkululeko? | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | EPhilippines, India, I-Tailandia, Ukuhamba kwe-Asia
Kunabantu abaningi ababhejela ngokuya kubunqunu, bobabili ekhaya nalapho behamba nohambo. Bakhetha ukujabulela amaholide abo ngendlela abazizwa bakhululeke ngayo ngempela, ukuthi akukho okubabophezelayo noma okumele kubacindezele. Abantu sebenemikhuba eminingi kakhulu yezenhlalo esungulwe nsuku zonke ukuze kuthi lapho siseholidini sicindezele isifiso sokuhamba nqunu uma ngabe yilokho esifuna ukukwenza, akunjalo?
Kepha awukwazi ukuya noma ikuphi bese uhlubula nqunu ukuze wenze ubunqunu nabanye abantu. Kunabanye abantu abangakwenzi bayavumelana nale ndlela yokuphila Futhi kufanele bahlonishwe, njengoba kufanele bakuhloniphe uma uthatha isinqumo sokwenza ubunqunu endaweni eyakhelwe yona.
Kepha kuthiwani uma ufuna ukuya e-Asia? Lapho uzokwazi ukufuna inkululeko ukuze ukwazi ukujabulela ubunqunu futhi futhi uthokozele lawo mazwe nomphakathi wawo nakho konke ekukunikeza kona? Ungalahlekelwa yimininingwane ngoba namuhla ngifuna ukukhuluma nawe ngenkululeko ongayithola uma ufuna ukuya ezwenikazi elikhulu lase-Asia.
1 Ingabe kukhona amabhishi anqunu e-Asia?
2 Kunezindawo ezithile zokuzijwayeza ubunqunu obuncane
2.3 Amanye amabhishi asogwini lwaseNdiya
Ingabe kukhona amabhishi anqunu e-Asia?
Ngiyaxolisa ukuba umuntu okufanele akutshele ukuthi empeleni, alukho ulwandle kulo lonke elase-Asia lapho ungathola khona amabhishi angama-nudist ngokuphelele nasemthethweni.. Umphakathi wase-Asia unesiko elilondolozayo Futhi ngokwezindinganiso zabo, ubunqunu abuyona inkambiso ebukelwa phansi noma ebhekwayo.
Kepha lena yithiyori, ngoba iqiniso ukuthi yize ezingeni elijwayelekile lokhu kungumcabango ovelele, iqiniso ukuthi abanye babantu abahlala e-Asia thola kubunqunu umkhuba okhululayo obasizayo ukuxhumana nengaphakathi labo futhi futhi nemvelo.
Kunezindawo ezithile zokuzijwayeza ubunqunu obuncane
Ngalesi sizathu, ezwenikazi elikhulu lase-Asia ungathola izindawo lapho izivakashi ezivela kwezinye izingxenye zomhlaba (kanye nabase-Asiya abanomqondo olandelanayo) bangenza ubunqunu obuncane ngaphandle kwezingxabano ezinkulu futhi ngaphandle kokuba nezinkinga zomthetho noma neziphathimandla zendawo .
Kunamazwe okungenani ama-5 noma ama-6 lapho ubunqunu bungenziwa khona ngaphandle kokwesaba imiphumela engemihle ngomthetho. Isibonelo, uma ufuna ukuya eThailand kunesitshalo lapho ubunqunu bamukelwa khona kancane futhi akekho ozokubheka ngokumangazayo uma ufuna ukujabulela leyo nkululeko ngisho nengxenye.
Ibhishi engikhuluma ngalo lisesiqhingini saseKoh Pha Ngan. Kepha kufanele uqaphele futhi uqinisekise izindawo lapho ungenza khona ubunqunu obuncane, ngoba ubunqunu ngokuphelele abukho emthethweni eThailand futhi uma ukuprakthiza bangakumisa. Uma uya eThailand kufanele uhloniphe imithetho njengakunoma yiliphi elinye izwe ukugwema izinkinga ezingadingekile.
Kunabantu abaningi abathi ubunqunu bungenziwa ePhilippines ngaphandle kwemiphumela emikhulu. Yize ungeke ukwazi ukwenza ubunqunu nomaphi lapho ufuna khona ngoba akukho emthethweni futhi ungaboshwa, kubonakala sengathi kukhona indawo ePhilippines lapho ungenza khona ubunqunu ngaphandle kokwesaba ukuthi wephula imithetho noma cha. Kusesifundazweni sasePalawan lapho kutholakala isiqhingi esibizwa ngeBoayan. Kulesi siqhingi ungaya endaweni lapho ungaqasha khona indawo nomlingani wakho futhi ngaleyo ndlela ukwazi ukujabulela ibhishi elikhethekile ukuze ukwazi ukwenza ubunqunu.
Ngalokhu ukuqasha uzoba nenketho yokwenza noma yini oyifunayo olwandle njengokuhamba nqunu ngokuphelele ungaphazanyiswa muntu. Vele, kufanele ube nokuziphatha okuhloniphayo nabanye abantu abajabulela ukuqasha kwabo kuleli bhishi. Ngamandla emali, yize ubunqunu bungavunyelwe, uma ukhokha ... ungakwenza endaweni elinganiselwe. Kepha ungacabangi ukukwenza ngaphandle kwendawo evunyelwe, ngoba lapho-ke ungaba nezinkinga.
Amanye amabhishi asogwini lwaseNdiya
Kepha uma lokhu engikutshele khona kuze kube manje kubonakala kukuncane kuwe futhi ufuna ukwazi okuthe xaxa, khona-ke kufanele wazi ukuthi emaphethelweni aseNdiya ungazijwayeza ubunqunu obuncane noma ubunqunu obunobuhlakani. Ziyizindawo ezingadli ngoludala futhi zingabekezelela abantu abazenzayo.
La mabhishi engikutshela wona anomlando futhi adlulile yingakho bengawubekezelela lo mkhuba, mhlampe ukube umlando ubungekho kanjalo bebengeke babekezelele le mikhuba. Kepha iqiniso ukuthi amanye ala mabhishi anakho ngokudlule okulondoloziwe nokukhululekile Babenethonya elikhulu kakhulu lamahippie ngakho amaNdiya ahlonipha umlando. Ngalesi sizathu, eminye imikhuba yakudala iyahlonishwa inqobo nje uma kungeyona into eyihlazo, engamanyala noma enganciphisa inhlonipho yabanye abantu.
Uma ufuna ukuya eNdiya ohambweni noma eholidini futhi unentshisekelo yokujabulela lezi zinhlobo zamabhishi, unganqikazi ukuya amabhishi afana ne-Ozra Beach noma iVagator Beach, bobabili baseGoa. Kuyo yonke le ndawo mhlawumbe ngamabhishi avulekele ubunqunu kule ndawo.
Uma ufuna ukuya kwa-Israyeli, kufanele wazi futhi ukuthi ubunqunu abuvunyelwe kepha uma uhambela amabhishi aseTel Baruch (atholakala enyakatho neTel Aviv), e-Eingedi noma oLwandle Olufile ungathola izindawo lapho ubhukuda khona ingabeka izingubo ngokuzikhethela nangxenye.
Kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ukuthi uma bekuvumela ukuthi wenze ubunqunu obuncane, kusho ukuthi awukwazi ukukhombisa umzimba wakho wonke unqunu, okungukuthi, akubona ubunqunu obuncane. Imvamisa zizokwenza ukuthi umboze izitho zangasese kanye nesinqe nge-swimsuit ukuze ubunqunu bukhombise ingxenye ephezulu yomzimba. Kufanele uqonde ukuthi ngamasiko ahluke kakhulu leyo okungenzeka unayo uma uthanda ukwenza ubunqunu, kodwa lokho kufanele kuhlonishwe njengoba uthanda ukuhlonishwa ekhaya, inhlonipho akufanele ihlale ingekho!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » EPhilippines » Ukufuna inkululeko? Ubunqunu e-Asia
Izinhlelo eziyi-10 zokuhamba zoSuku Lomama